यौन सम्पर्क गर्दा युवत्तीको योनी-स्तन चलाउँनु पर्छ कि पर्दैन ! [१८+ ले हेर्नुहोला्] « Janaboli
काठमाडौं । म ३२ वर्षीया युवती हुँ । करिब ७ वर्ष अघि मेरो एकजना केटा
२२ वर्षीया कमलको अनौठो समस्या, हस्तमैथुन गर्छन तर युवतीले गर भन्दा पनि गर्दैनन् !
काठमाडौं । नमस्कार, मेरो नाम कमल खड्का हो । म अहिले २२ वर्षको भए ।